War - Markaad u adeegsanaysid mashiinka jeex jeexa wax soo saar, habka jeexitaanka waa in fiiro gaar ah loo yeeshaa oo aan si fudud loo qaadan
Markaad isticmaaleyso mashiinka jeexjeexa wax soo saarka, habka jeexitaanka waa in fiiro gaar ah loo yeeshaa oo aan si fudud loo qaadan. Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu isku dari doonaa filimka iskudhafan ee BOPP / LDPE filimka iskudhafan, dhibaatooyinka tayada leh ee ka dhaca geedi socodka wax soo saarka dillaaca iyo dhibaatooyinka la xiriira mashiinka jeexjeexa si loo falanqeeyo.
1. Xakamee xawaaraha jarista
Markaad geleyso wax soo saar caadi ah, xawaaraha mashiinka jeexjeexa waa inuu si adag u raacaa shuruudaha nidaamka. Aad u sareeya sidoo kale waxay saameyn doontaa tayada goynta. Sidaa darteed, adoo xakameynaya xawaaraha jeexitaanka, tayada looga baahan yahay jeexitaanka ayaa la heli karaa. Sababtoo ah, soo saarista, hawl wadeenada qaar waxay si macmal ah u kordhiyaan xawaaraha goynta si loo kordhiyo wax soo saarka loona hagaajiyo faa'iidooyinkooda dhaqaale. Tani waxay ka dhigeysaa filimku inuu u nugul yahay qulqulatooyinka dhaadheer iyo dhibaatooyinka tayada lakabyada ee hawlgalka xawaaraha sare leh.
2. Xullo habka jeexitaanka ku habboon iyadoo loo eegayo qalabka iyo waxqabadka filimka
Soo saarida caadiga ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato tikniyoolajiyad jeexjeexan oo habboon oo loogu talagalay wax soo saarka iyadoo loo eegayo waxqabadka qalabka, sifooyinka gaarka ah ee filimka, iyo noocyada iyo tilmaamaha filimka. Sababtoo ah xuduudaha nidaamka, hababka aqoonsiga, iyo qiimayaasha filimada kala jaban way kala duwan yihiin, howsha waa in si taxaddar leh loogu hagaajiyaa shay kasta.
3. Fiiro gaar ah u yeelo xulashada saxda ah ee xarumaha shaqada
Soosaarka, inta jeer ee la isticmaalo saldhig walba ee kala-baxa ayaa ka duwan, sidaas darajada xirashada sidoo kale way ka duwan tahay. Sidaa darteed, waxaa jiri doona farqi gaar ah oo ku saabsan waxqabadka. Tusaale ahaan, waxaa jira xariiqyo toosan oo yar oo loogu talagalay kala-goynta alaabada xaalad wanaagsan. Taas bedelkeeda, waxaa jira xarigyo dhaadheer oo dheeri ah. Sidaa darteed, hawl wade kastaa waa inuu fiiro gaar ah u yeesho xulashada saxda ah ee xarumaha shaqada, siiya ciyaar buuxda xaalada ugu wanaagsan ee qalabka, qabsado adeegsiga goobta, si joogto ah u soo koobo khibrada, iyo inuu helo adeegsiga astaamaha ugu wanaagsan ee qalabka.
4. Hubso nadaafada filimka
Intaas waxaa sii dheer, waa in la ogaadaa in inta lagu guda jiro howsha jeexitaanka, duub kasta oo filim ah dib loo furo ka dibna dib loo laabo, taas oo abuuraysa xaalad gelitaanka walxaha shisheeye. Maaddaama sheyga filimka laftiisa inta badan loo isticmaalo baakadaha cuntada iyo daawada, Sidaa darteed, shuruudaha nadaafadda waa kuwo aad u adag, marka waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in duub kasta oo filim ah uu nadiif yahay.